TechShares စျေး - အွန်လိုင်း THS ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို TechShares (THS)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ TechShares (THS) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ TechShares ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ TechShares တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
TechShares များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
TechSharesTHS သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00652TechSharesTHS သို့ ယူရိုEUR€0.00555TechSharesTHS သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00498TechSharesTHS သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00597TechSharesTHS သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0587TechSharesTHS သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0413TechSharesTHS သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.145TechSharesTHS သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0244TechSharesTHS သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0087TechSharesTHS သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00909TechSharesTHS သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.146TechSharesTHS သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0505TechSharesTHS သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0357TechSharesTHS သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.488TechSharesTHS သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.1.1TechSharesTHS သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00896TechSharesTHS သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00986TechSharesTHS သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.203TechSharesTHS သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0453TechSharesTHS သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.692TechSharesTHS သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩7.72TechSharesTHS သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦2.53TechSharesTHS သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.479TechSharesTHS သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.18
TechSharesTHS သို့ BitcoinBTC0.0000006 TechSharesTHS သို့ EthereumETH0.00002 TechSharesTHS သို့ LitecoinLTC0.000111 TechSharesTHS သို့ DigitalCashDASH0.00007 TechSharesTHS သို့ MoneroXMR0.00007 TechSharesTHS သို့ NxtNXT0.491 TechSharesTHS သို့ Ethereum ClassicETC0.000925 TechSharesTHS သို့ DogecoinDOGE1.85 TechSharesTHS သို့ ZCashZEC0.00007 TechSharesTHS သို့ BitsharesBTS0.238 TechSharesTHS သို့ DigiByteDGB0.21 TechSharesTHS သို့ RippleXRP0.0216 TechSharesTHS သို့ BitcoinDarkBTCD0.000219 TechSharesTHS သို့ PeerCoinPPC0.021 TechSharesTHS သို့ CraigsCoinCRAIG2.89 TechSharesTHS သို့ BitstakeXBS0.271 TechSharesTHS သို့ PayCoinXPY0.111 TechSharesTHS သို့ ProsperCoinPRC0.798 TechSharesTHS သို့ YbCoinYBC0.000003 TechSharesTHS သို့ DarkKushDANK2.04 TechSharesTHS သို့ GiveCoinGIVE13.75 TechSharesTHS သို့ KoboCoinKOBO1.45 TechSharesTHS သို့ DarkTokenDT0.00601 TechSharesTHS သို့ CETUS CoinCETI18.33